ပူပြင်းတဲ့လေ - Twesix
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ပူပြင်းတဲ့လေ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
အရောင်းအလုပ်များတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အတူ Twesix သည်အရည်အသွေးအာမခံချက်အတွက်ပိုမိုအရေးပါသည်။.
Selectionality 1500kg သစ်သီးခြောက်စက်သည်အပူပိုင်းခြောက်သွေ့သော dehumdifying funitions dphg150s-g စက်ရုံ
Fruit Drying Machine သည်သစ်သီးခြောက်သွေ့သောသစ်သီးများကိုခြောက်သွေ့သောသစ်သီးများကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ jerimmons ခန်းခြောက်။ apricots ခန်းခြောက်။ ပန်းသီးချပ်ခြောက်သွေ့ခြင်း။ ခြောက်သွေ့သောရက်စွဲများ။ သင်္ဘောသဖန်းသီးခြောက်Twesix Searchality 1500 ကီလိုဂရမ်အသီးခြောက်စက်ကိုအပူခြောက်သွေ့သော dephumdifying funting funtings-dphg150s-g စက်ရုံ, စက်ရုံ, စက်ရုံ, OEM / ODM အမိန့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ Twsix အသီးကိုအခြောက်ခံစက်သည်သင်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်ဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်တွင်လူအချို့သည်လူအချို့ရှိပြီးအစားအစာမှအစိုဓာတ်ကိုတားဆီးခြင်းအားဖြင့်ငွေကိုချွေတာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
မြင့်မားသောအရည်အသွေး ၅၀ ကီလိုဂရမ်အိမ်ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်ခြံများအတွက် TXS032 လက်ကား - Foshan Shunde Twesix စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်သစ်သီးခြောက်သွေ့စေသောအသားခြောက်စက်
အစာအမျိုးမျိုးကို သုံး၍ အစားအသောက်ခြောက်စက်သည်သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးများ၊ အသားများ၊ ပန်းများ၊အစားအစာရေခန်းခြောက်ခြင်းကိုအိမ်၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ လယ်ယာနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်အစားအစာခြောက်စက်တွင်ပါဝင်သည်* သံမဏိ ၃၀၄ သံမဏိအမျိုးအစား ၃၂ ပြား* ပါဝါ 3150W* ဗို့အား: 100-240V 50 / 60Hz* 201 သံမဏိအိမ်ရာ* အပူချိန် 40-90 ℃ (104-194 4)* စွမ်းရည် 220L* စက်အရွယ်အစား - ၅၉၅ * ၄၂၀ * ၁၄၆၀ မီလီမီတာ* ကဘ: ၅၀ ကီလိုဂရမ်Twesix HighQuality ၅၀ ကီလိုဂရမ် Home ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်ခြံများအတွက် TXS032 လက်ကား -Foshan Shunde Twesix Energy Co. , Ltd, စက်ရုံ၊ စက်ရုံမှစက်ရုံနှင့်စက်ရုံများသည် OEM / ODM အမှာစာများကိုမှာယူကြသည်။